ချာလီနစ်ကိုးလပ်စ် ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် ရဲ့ Team of the Season - SPORTS MYANMAR
April 10, 2020 - by Edi Tor
ဂိုး – အီဒါဆင်
အလီဆွန်ဟာ လီဗာပူးတို့ နောက်တဆင့်ကို တက်ဖို့ အတွက် အဓိက ကစားသမား တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဂိုးသမား အားလုံး အမှား ရှိကြတာပါပဲ။ အီဒါဆင် ရဲ့ ရှင်းထုတ်မှု ၊ သူ့ရဲ့ အနီးပေး အဝေးပေး တွေဟာ အရမ်းကို ကောင်းလှပါတယ်။ ဗဟို နောက်ခံလူတွေ ၊ ကွင်းလယ် ခံစစ် ကစားသမား နဲ့ သူဘောလုံး ပေးပို့ ကစား နေတာကို ခင်ဗျားတို့ တွေ့မှာပါ။ သူ့ရဲ့ ဘောလုံး ပေးပို့တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် တကယ့်ကို နှစ်သက်စရာပါ။
သူဟာ ဒီအပိုင်းမှာ ရဲရင့် လှပါတယ်။ ပြီးတော့ သူဟာ ဒီရာသီ လာပေါ့ဒ် မရှိတဲ့ ခံစစ်နောက်မှာ ကစား နေရတာပါ။ ဒီရာသီ စီးတီး အတွက် အီဒါဆင် ရဲ့ အမှတ် ရှာဖွေ ပေးမှု တွေကိုလည်း ခင်ဗျားတို့ တွေ့ရမှာပါ။ အကယ်၍ ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ်တွေသာ ဆက်ကစားမယ် ဆိုရင် သူဟာ စီးတီး တို့ နောက်အဆင့်တွေကို တက်နိုင်မယ့် အဓိက အကြောင်းရင်း ဖြစ်မှာပါ။ သူ မက်ဒရစ်မှာ သိပ်ပြီး အခက်အခဲ မတွေ့ ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူဟာ လိုအပ်တဲ့ အချိန်မှာ အရေးပါတဲ့ ကာကွယ်မှုတွေ လုပ်ပေး ခဲ့ပါတယ်။
ညာနောက်ခံလူ – အလက်ဇန်းဒါးအာနိုး
ထရန်အလက်ဇန်းဒါးအာနိုး နဲ့ ရောဘတ်ဆန် တို့ဟာ အတော့်ကို လုပ်အားကောင်းတဲ့ အတွဲပါ။ ထရန့်ဟာ ဒီအသင်းမှာ ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့ ပစ်မှတ် ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အကောင်းဆုံး ခံစစ် ကစားသမားလား? မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အကောင်းဆုံး ဘောလုံး ပေးပို့သူ တွေထဲက တစ်ဦးပါ။ သူ့ရဲ့ ဖြတ်တင်ဘော စွမ်းရည်ဟာ နှစ်ယောက် မရှိပါဘူး။ သူ ဘောလုံးရတဲ့ အခါမှာ တစ်စုံတစ်ခုတော့ ဖြစ်တော့မယ် ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကို ရပါတယ်။ အတားအဆီး ကြားထဲ ကတောင် သူဟာ ဘောလုံး ပေးပို့ နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ သူဟာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ တောင်ပံ ကစားသမားလို ကစား နေတာပါ။ သူတို့ ဂိုးနဲ့ ကိုက် ၃၀ အကွာလောက် ရောက်လာပြီ ဆိုရင် ပရိတ်သတ်က မတ်တပ်ထတော့တာ ပါပဲ။
ဘယ်နောက်ခံလူ – ရောဘတ်ဆန်
သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံး တွေကတော့ မြန်နှုန်း ၊ စွမ်းအင် နဲ့ တိုက်စစ်ကို လိုက်ပါ ပံ့ပိုးမှုတွေ ပါပဲ။ အားလုံးမှာ အားနည်းချက်တော့ ရှိကြပါတယ်။ သူကလည်း ထရန့်လိုပဲ နောက်တန်းမှာ အမှားတွေ များသူပါ။ လီဗာပူးဟာ နောက်တန်း အစွန်လူ နေရာမှာ စီးတီးထက် အများကြီး ကောင်းပါတယ်။ မန်စီးတီးဟာ နောက်တန်းအစွန်လူ ၂ ဦး အတွက် ပေါင်သန်း ၁၀၀ လောက် သုံးထား ခဲ့ပေမယ့် လီဗာပူး ကတော့ ရောဘတ်ဆန် အတွက် ပေါင် ၈ သန်း နဲ့ ထရန်က အကယ်ဒမီ ကပါ။
ရောဘတ်ဆန်ဟာ ရင်သပ်ရှုမောလောက်အောင် ကောင်းပါတယ်။ သူဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့် အဖြစ် တိုးတက် လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီကစားသမား ၂ ဦးဟာ တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံး အသင်းမှာ နောက်ထပ် ၃ နှစ် ၄ နှစ်လောက် ထပ်ပါအုံးမယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။
ဗဟိုနောက်ခံလူ – ဗန်ဒိုက်
ဗန်ဒိုက်ဟာ ဒီအသင်းမှာ ပါဝင် ရမှာ ဖြစ်ပြီး သူဟာ Rolls Royce of the game ပါ။ သူ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီကလောက် မကောင်းပေမယ့် သူ့ရဲ့ မြန်နှုန်း ၊ ဘောလုံး ကစားပုံ နဲ့ အန္တရာယ်ကို တွက်ဆမှု ကတော့ ထိပ်တန်း မှာပါပဲ။ သူ လျှောထုတ် ဖျက်ထုတ်တာတို့ ဘာတို့ကို မြင်ရခဲပါတယ်။ အကယ်၍ အရမ်းမြန်တဲ့သူ လှည့်စားနိုင်တဲ့သူ ဆိုမှသာ အခွင့်အရေး ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ကို ကျော်ရတာ မလွယ်ပါဘူး။ သူဟာ ပွဲကို ကောင်းကောင်း ထိန်းချုပ် ပေးနိုင်သူပါ။
သူဟာ တအားကို ကောင်းပါတယ်။ လူတွေဟာ သူ့ကို စမ်းသပ်ရမှာကို ကြောက်ကြပါတယ်။ မျှောဘောတွေ ကသာ သူ့ကို အနည်းငယ် ကစားရ ခက်စေမှာပါ။ သူဟာ ဦးဆောင်သူ တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့အပြင် အနီးဘော အဝေးဘောတွေလည်း တအား တိကျပါတယ်။ တိုက်စစ်မှာကော ခံစစ်မှာပါ အမြင့်ဘော ကောင်းသူ ဖြစ်တာကြောင့် သူ ဒီအသင်းမှာ ပါရမှာပါ။
ဗဟိုနောက်ခံလူ – အီဂန်
ဒီလူဟာ ကျွန်တော် တစ်ရာသီလုံး သဘောကျနေတဲ့ သူပါ။ ရှက်ဖီးဟာ နောက်တန်း ၃ ဦးနဲ့ ကစားတာကို ကျွန်တော် သိပါတယ်။ သူဟာ တစ်ရာသီလုံး ထူးချွန်စွာ ကစားပြနေတာပါ။ သူဟာ ရဲရင့်ပြီး စစ်သည် တစ်ဦးလိုပါပဲ။ သူဟာ နောက်တန်းကို ဦးဆောင် ပေးနိုင်သူ ဖြစ်ပြီး အရမ်းကောင်းတဲ့ ဂိုးသမား ရှိနေပေမယ့် သူဟာ ရှေ့ကနေ တားဆီး ကာကွယ် ပေးနိုင်ပါတယ်။ လူတွေဟာ အခြား တန်ဖိုးကြီး နောက်ခံလူတွေကိုသာ အာရုံစိုက် ခဲ့ကြပေမယ့် ရှက်ဖီး ကစားသမားတွေဟာ သူတို့ကို အာရုံစိုက်လာတဲ့ အထိ စွမ်းဆောင်ပြ ခဲ့ကြပါတယ်။ သူဟာ PL level နဲ့ လုံးဝကို သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်နေပါတယ်။
ကွင်းလယ် – ဒီဘရိုင်း
ကွင်းလယ်မှာ သူ့ကို ပထမဦးဆုံး ရွေးရမှာပါ။ သူဟာ ဒီရာသီမှာ အကောင်းဆုံး လုပ်ပြ ထားခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ ဖန်တီးမှု ၊ သွင်းဂိုး ၊ ဘယ်ခြေ ညာခြေ ကစားနိုင်မှု ၊ အနီးဘော အဝေးဘော ကောင်းမွန်မှု တွေဟာ အံ့သြစရာပါ။ လီဗာပူး ကစားသမားတွေ ဒီရာသီ အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင် ပြထား ခဲ့ကြပေမယ့် ဒီဘရိုင်း ကလည်း မြင့်မားတဲ့ အဆင့်အတန်းနဲ့ တည်ငြိမ်စွာ ခြေစွမ်းပြ ကစား နေခဲ့ပါတယ်။
မက်ဒရစ်နဲ့ ပွဲဟာ သူ့ရဲ့ masterclass ပါ။ ပွဲအချို့ လွဲပြီး သူဟာ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာ ကောင်းလှပါတယ်။ ကျွန်တော် ကတော့ တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံးဆုကို သူနဲ့ မာနေးပဲ လုသွားရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အသင်းမှာ သူ့ကို မရွေးစရာ ဘာအကြောင်းမှ မရှိပါဘူး။
ကွင်းလယ် – ရိုဒရီ
၃ လ ၄ လလောက် ကောင်းခဲ့တဲ့ မက်ဒီဆင် နဲ့ အန်ဒီဒီ တို့ကို ကျွန်တော် ကြည့်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာ ဘယ်သူက အကောင်းဆုံး ကွင်းလယ် ခံစစ်ကစားသမားလဲ? ဖာဘင်ညိုက သူနဲ့ နီးစပ်မှု ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် all-round play မှာတော့ ရိုဒရီ က ပိုကောင်းပါတယ်။ လက်စတာ နဲ့ ဝုဖ် ကစားသမား တစ်ဦးဦးလည်း ပါဝင် သင့်ပါတယ်။ မော်တင်ညိုဟာ အရမ်း ကောင်းခဲ့ပါတယ်။
ကွင်းလယ် – ဂရီလစ်ချ်
ဂျက်ဂရီလစ်ချ်ဟာ ထိပ်တန်း စွမ်းရည်ကို ပြသခဲ့တဲ့ ရာသီကို ပိုင်ဆိုင် ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ မက်ဒီဆင်ထက် အများကြီး ပိုကောင်းတယ်လို့ ကျွန်တော် ခံစား မိပါတယ်။ သူဟာ ဗီလာရဲ့ တိုက်စစ် တာဝန်ကို ပခုံးထမ်း ထားရသူပါ။ ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ ထိပ်တန်း ကွင်းလယ်လူတွေ အများကြီးပါ။ ဒါပေမယ့် သူဟာ ချွန်ထွက် နေပါတယ်။ သူဟာ ဘောလုံးကို လက်ခံရယူချင်စိတ်ရှိပြီး ကျွန်တော် တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးတဲ့ ရင့်ကျက်မှုကို ပြသခဲ့ ပါတယ်။ သူဟာ နှစ်သက်စရာ ဘောလုံးသမား ဖြစ်ပြီး ဗီလာ အတွက် အများကြီး စွမ်းဆောင် ပေးထား ခဲ့ပါတယ်။ ဗီလာ ဟာ ရုန်းကန် နေရပေမယ့် သူကတော့ မျက်စိကျစရာ ကစားသမားပါ။ ဒါ့ကြောင့် သူ့ကို ဒီအသင်းမှာ ရွေးလိုက်ပါတယ်။
တိုက်စစ် – အူဘာမီယန်း
သွင်းဂိုးတွေ အတွက် သူ့ကို ရွေးချယ် သွားချင်ပါတယ်။ အာဆင်နယ်ကို ရောက်ပြီး ကတည်းက သူ့ရဲ့ ဂိုးသွင်း မှတ်တမ်းဟာ အရမ်းကို ကောင်းနေပါတယ်။ ဒီဘရိုင်း နဲ့ ဂရီလစ်ချ် ဟာ သူ့ကို ကောင်းကောင်း ထောက်ပံ့ နိုင်မှာပါ။ သူ့ရဲ့ မြန်နှုန်း ၊ ရွေ့လျားမှုတွေဟာ တားဆီးရ ခက်ခဲပါတယ်။ သူဟာ နံပါတ် ၉ နေရာမှာတော့ အရမ်း မကောင်းလှပေမယ့် ဘယ်ခြမ်းကနေ အတွင်းဝင်ပြီး ဂိုးသွင်းမှုတွေ ကတော့ အရမ်း ကောင်းပါတယ်။
တိုက်စစ် – ဖာမီနို
လူတိုင်းကတော့ ဂိုးသွင်းကောင်းသူတွေကို ရွေးကြမှာပါ။ ဂျီမီနက် ၊ ဂျိုတာ ၊ ဒန်နီအင့် ၊ ကလာဗန်လီဝန် နဲ့ ဗာဒီ တို့လို လူတွေ ရှိပေမယ့် ကျွန်တော်ဟာ ဖာမီနိုရဲ့ အမာခံ ပရိတ်သတ်ပါ။ သူဟာ ဂိုးတွေ အများကြီး သွင်းသူ မဟုတ်ပေမယ့် ဖန်တီးမှုတွေ လုပ်တာကသာ သူ့ရဲ့ ကစားဟန်ပါ။ ပြီးတော့ သူဟာ အရေးကြီး ပွဲတွေမှာ ဂိုးတွေ သွင်းလေ့ ရှိပါတယ်။ သူဟာ နံပါတ် ၉ ဖြစ်ပေမယ့် နံပါတ် ၁၀ နေရာမှာ ကစားပြီး မာနေး ဆာလား တို့ကို ထောက်ပံ့ ပေးပါတယ်။ သူဟာ ဒီနှစ်ဦးထက် အလုပ်ပိုလုပ် ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူဟာ ဒီအသင်းမှာ ပါကို ပါရမှာပါ။ ကျွန်တော် သူ့ကို တအား ကြိုက်ပါတယ်။
တိုက်စစ် – မာနေး
မာနေးဟာ ဒီရာသီ အထူး စွမ်းဆောင်ထား ခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ ဂိုးတွေဟာ အရမ်းကို အရေးပါခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ တစ်ကိုယ်ကောင်း မဆန်တဲ့ ကစားသမားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ခြေစွမ်း တည်ငြိမ်မှုဟာ နှစ်ယောက် မရှိပါဘူး။ သူ့ရဲ့ မြန်နှုန်းဟာ နောက်တန်းတွေ အတွက် ထိပ်လန့်စရာ ဖြစ်ပြီး ဘလွန်းဒီအောဆု အတွက် မက်ဆီ သူ့ကို ရွေးခဲ့တာကို ကြည့်ရင် သဘောပေါက်မှာပါ။ ဆာလားဟာ လီဗာပူးမှာ ကောင်းကောင်း လုပ်ပြ ထားပြီး လီဗာပူး ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်ပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီတိုက်စစ် အတွဲနေရာမှာ ဗက်နာနဲ့ အစားထိုးမယ် ဆိုရင် လီဗာပူး ပရိတ်သတ်တွေဟာ မာနေး နဲ့ ဖာမီနို တို့ကိုပဲ ထိန်းထား ချင်မှာပါ။
အက်စတွန်ဗီလာနဲ့ ပွဲစဉ် အတွက် လီဗာပူးတို့ ပြင်ဆင်ထားရမယ့် အရာတွေကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ယာဂန်ကလော့
မီဆွတ် အိုဇေးလ် ရဲ့ ပွဲထွက် ကစားခွင့် နဲ့ အနာဂတ် အကြောင်း ပြောကြားလိုက်တဲ့ အာတီတာ
ဂီတာဖေး ကို အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ပွဲမှ အသင်းသားတွေရဲ့ ပေးဆပ်လိုစိတ် အပေါ် ထုတ်ဖော် ချီးကျူးလိုက်တဲ့ #ဇီဒန်း
လက်ရှိ ချန်ပီယံတို့ အီတီဟတ်မှာ ချေမှုန်းခံခဲ့ရတဲ့ မန်စီးတီး ၄-၀ လီဗာပူး ပွဲစဉ်မှ ထူးထူးခြားခြား ပြောစရာများ
တီမို ဗာနာ ကို တရားဝင် ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးနောက် လာမယ့် ရာသီ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံဆု စိန်ခေါ်နိုင်ခြေ အပေါ် ခန့်မှန်း သုံးသပ်လိုက်တဲ့ #ဘာဘာတော့ဗ်